Laxative maka ọnwụ ọnwụ
Iburu ndi ozo maka uzo ihe omuma bu ihe omuma a ma ama na ndi mmadu bu ndi "riri" onwe ha. Kemgbe mmalite nke puku afọ nke abụọ, ụdị ahịa nke ndị na-agba akwụkwọ na-arịwanye elu nke ukwuu na mgbasa ozi ha agaghị aga ada. Ọ ga-adị ka, dị ka ọ dị mma, mgbe ememe dị oké ọnụ ahịa, ebe m ga-eri ụdị nri ọ bụla ma gbochie ya ka ọ bụrụ ihe ojoo, m riri mkpụrụ ọgwụ ma n'echi ya, ibu ahụ dị mma. Karịa na ọ dị njọ ma ọ bụrụ na enwere obi ụtọ ịnakwere ụra nke na-eto eto, gụkwuo ala.
Ụkpụrụ nke ọrụ
Ịghara ibu ibu site n'enyemaka nke ndị ụkọchukwu bụ n'ihi iwepụ ihe nchekwa si eriri afọ (n'ebe ahụ, ha dị ihe dịka 3kg kwa ụbọchị). Nke a bụ - ọcha-ọcha-ọcha. Mmetụta ya bụ otu ụbọchị, ọ gwụla ma, n'ezie, ị ga-ewere ha kwa ụbọchị.
A na-ekewa ihe ndị na-agụnye iwu na-emetụta ahụ dị iche iche:
Akara laxative - cellulose + kefir. Naanị ihe dị mma ma dị mma maka ihe na-efu. Ọdịdị dị n'ụdị ọka ụrọ na-agbaba na eriri afọ ya na site n'ịdị arọ ya na-eme ka stool ahụ gaa "njedebe", nafir na normalizes microflora intestinal. Site n'iji usoro a, echefukwala ịṅụ ọtụtụ mmiri. Naanị mmiri mmiri zuru ezu, eriri ahụ na-agba, na enweghị mmiri ị ga - enweta mmetụta ọzọ - afọ ntachi.
Ịnara tii site na hay, dịka ụra maka ọnwụ. A pụrụ ime usoro dị otú ahụ maka "nhicha" naanị otu ugboro kwa ọnwa isii. Tea na mbadamba nkume si Senna ma ọ bụ ngwaahịa ndị yiri ya - sorbitol, maltitol, wdg, na-eme ka spasms nke eriri afọ. Ọ na-eri ahụ.
A na-akpọ ihe kachasị oge a na-eme maka ịdị ala. N'eziokwu, ha bụ salts nkịtị. Naanị otu mbadamba na ụbọchị a na-anọ n'ụlọ mposi, a na-enye gị. Ihe mbadamba nkume ahụ dabeere n'eziokwu bụ na salts ndị a dị ọkụ karịa mmiri, si otú a na-afụkọta stool ya na ndị ọzọ, ya bụ, osisi ogwu. Ihe kpatara ya: ịrịa ahụ, ịchịa mmiri, ịkọ nri, mgbe o jiri ya, usoro ọgwụgwọ na probiotics dị mkpa.
Mmanụ paraffin - ụfọdụ na-atụ aro ka ha jupụta salads, ebe ọ bụ na eriri afọ adịghị etinye ya n'ahụ, mana n'otu oge ahụ, ọ na-akpali akpali nke stool. Ihe ahụ mmanụ paraffin ahụ nwere ike imere gị bụ afọ ọsịsa.
Dịka ha na-ekwu na isi mmalite ndị a na-ewu ewu, ndị na-elekọta mmiri na-echebe onwe ha pụọ ​​na ịṅụ abụba na carbons. Ejila nkụda mmụọ, mana ọtụtụ carbohydrates na-etinye uche ngwa ngwa karịa ka i nwere oge ikwu "laxative." Banyere abụba, ebe ha na-ejide onwe ha bụ afo, onye na-enweghị ihe ọ bụla ọ ga-eme. Ma mmebi nke ọrụ nke ịmịnye mgbidi nke vitamin vitamin laxative ga-enye gị. Niile Chọpụta ọcha etisasịwo na ya na-ekpochapụ ya na mmiri, beriberi na-ekwe nkwa.
Nkwado mmụta uche na uche
Nri nke ihe ndị a na-akpọ larịị elekere maka ụkọ ọnwụ na-akpata ịdabere. Nke ahụ bụ, mgbe i risịrị nri, ị ga-ahụ ya dị nnọọ mfe iji kpochapụ ya ozugbo. Site n'oge ruo n'oge, ị ga-ejide ụbụrụ gị n'eziokwu ahụ bụ na a na-agụnye laxative bụ akụkụ dị mkpa nke ịga ụlọ mposi.
Nkwado nke anụ ahụ
Ọrụ ahụ kpọmkwem nke eriri afọ bụ excretion nke stool. Ọ bụrụ na o nweghị ike ịnagide ọrụ ya, ọ bụ oge ịhụ dọkịta. N'iji ndị na-agụ akwụkwọ, ị na-ejide eriri afọ iji nye aka mgbe nile. Ọzọ, "lazier" ọ ga-arụ ọrụ ya. N'ihi ya, ị ga-enweta ntachi anya mgbe niile na ntakịrị ịjụ ndị ụkọchukwu.
Ọ bụrụ na ị ka na-ejighị n'aka, azịza nye ajụjụ a ma ọ bụrụ na laxative maka ọnwụ arọ ga-abụ - "ee, maka otu ụbọchị", họrọ usoro a nabatara - kefir na bran . "Kọwaa" nke stool ga-enyere aka, ma otu ụbọchị (!) Ga-ebelata ibu arọ gị.
Kedu ihe bara uru maka imeju ọkụkọ?
Sie eyịm - ọma na ihe ọjọọ
Akara flakes maka mgbapụta ọnwụ
Kedu calorie ole ka ha dị na raspberries?
Ihe oriri ndị nwere ọtụtụ vitamin B?
Na-agba ọsọ n'ụtụtụ maka ndị na-amalite - nhazi
Kedu calorie ole dị na pasta?
Laryngitis na ụmụaka - mgbaàmà
Ebumnuche maka ịse foto akụkọ ịhụnanya
Mama m na ụmụ nwanyị ndị nwanyị ha zutere na foto ahụ n'otu afọ ahụ!
Cocktails na gin
Burdock mgbọrọgwụ - ọgwụ Njirimara
Ugbo ọka a na-akọ na American
Nkume a na-egwu nkume (Alta)
Yoko Ono, Natalia Vodyanova, Serena Williams na ndị ọzọ a ma ama na Pirelli-2016
Kedu otu esi egwu ọkụkọ maka shish kebab?
Lea Seydou - ndụ onwe onye
Ụmụ nwanyị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ajị anụ
Kedu otu esi achọpụta ọdịdị ihu?
Ntụziaka maka "Macaroni"
Nwa Madonna agaghịzi achọ ịnọnyere mama ya
Parquet - imewe